တရုတ်ပြည်မကြီးက DPP အာဏာပိုင်များ၏ စွပ်စွဲချက်များသည် ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆန့်ကျင်နေကြောင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချ - Xinhua News Agency
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက် ၂၇၅၈ ကိုဆန့်ကျင်ကာ ထိုင်ဝမ်ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီ(DPP) အာဏာပိုင်များ၏ ထပ်ဖန်တလဲလဲ ပုံဖျက်ပြောဆိုမှုများနှင့်ဝေဖန်မှုများကို တရုတ်ပြည်မအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချလိုက်သည်။ထိုင်ဝမ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ဟူ၍ ငြင်းဆိုရန် ထိုင်ဝမ် အာဏာပိုင်များ၏ ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်နေမှုသည် အန္တရာယ်အလွန်များသော ရန်စမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ထိုင်ဝမ်ရေးရာရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ကြေညာချက်တစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၌ အများစုထောက်ခံမှုဖြင့် ပြဌာန်းခဲ့သော ဆုံးဖြတ်ချက် ၂၇၅၈ သည် တစ်ကြိမ်ဖြေရှင်းခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့် ယင်းမှာ နိုင်ငံရေး ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် ကုလသမဂ္ဂ၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကိစ္စရပ်အားလုံးအတွက် ဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆိုသည်။
ကုလသမဂ္ဂတွင် ထိုင်ဝမ်၏ “ ကိုယ်စားပြုမှု” ဟူ၍ ထပ်ဖန်တလဲလဲ ရေးသားပြောဆိုနေခြင်းသည် နိုင်ငံတကာဥပဒေတစ်ခုကို မထီလေးစား နှင့် လျစ်လျူရှုသည့် အပြုအမူတစ်ခုပင်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပြီး DPP အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်နေကြောင်း ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတွင် ထိုင်ဝမ်ဒေသ၏ ပါဝင်မှု နှင့် ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုများသည် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒကို ဆုတ်ကိုင်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးသည် ကိစ္စရပ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းထံမှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထောက်ခံမှုရရှိထားပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက် ၂၇၅၈ သည် နိုင်ငံတကာဥပဒေ၏ အခွင့်အာဏာရပ်ကို ဖော်ညွှန်းပြသခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့် ယင်းအား ပုံဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် စိန်ခေါ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် လုံးဝခွင့်မပြုကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။(Xinhua)
Mainland denounces DPP authority’s accusations against UN resolution
BEIJING, Oct. 14 (Xinhua) — A Chinese mainland spokesperson Thursday denounced Taiwan’s Democratic Progressive Party (DPP) authority’s repeated distortions and criticisms against the United Nations General Assembly Resolution 2758.
The DPP authority’s act aims to deny that Taiwan isapart of China and isadangerous provocation, saidastatement by the spokesperson for the State Council Taiwan Affairs Office.
Resolution 2758, adopted by the UN General Assembly in 1971 with an overwhelming majority, has solved once and for all the issue of China’s representation in the UN in political, legal, and procedural terms.
Hyping the “representation” of Taiwan at the UN is an act of ignorance and contempt for international law, said the statement, adding that the DPP authority aims to stir up political issues by doing so.
It stressed that the Taiwan region’s participation in international organizations and their events must be handled per the one-China principle.